ShweMinThar: ဘာ့ကြောင့်6packs abs မရသေးတာလဲ ?
ဘာ့ကြောင့်6packs abs မရသေးတာလဲ ???
(Abs goal for 2017 - လုပ်နည်းစုံ)
ထင်ရှားတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားက လူတစ်ယောက်ရဲ့ လူနေမှုပုံစံကို အကောင်းဆုံး ထင်ဟပ်ပြနိုင်တဲ့ ကြွက်သားဆို မမှားပါဘူး။ အရင် ပိန်လွန်းသူတွေကနေ Abs ရဖို့ဟာ မခက်ခဲလှပေမယ့် ဝသူတွေ၊ အဆီအတော်အသင့်ရှိသူတွေအတွက်6packs abs ရဖို့ မလွယ်လွန်းလှပါဘူး။
အစားအစာကို ဂရုစိုက်ဖို့ ဗဟုသုတရှိတာ၊ အရသာ အာသီသနောက်ကို မလိုက်ဖို့ ထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့ စိတ်ဓါတ် စည်းကမ်းမြင့်မားတာ၊ လိုချင်တာကို ရဖို့ မရမချင်း တစိုက်မတ်မတ်လုပ်တတ်တဲ့ စွမ်းအင်ရှိတာ စတဲ့ အရည်အသွေးတွေနဲ့ ပြည့်စုံမှ ရနိုင်တာမလို့ ထင်ရှားတဲ့6packs abs ဆိုတာ Bodybuilding လောကရဲ့ စွမ်းရည်ပြ လက်မှတ်တစ်ခုလို ဖြစ်နေတော့တာပါပဲ။
ဒီလို လူတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အချင်းကို ပြရုံတင်မကပဲ ခက်ခဲ့တဲ့ စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကို အများနဲ့ မတူ ကျော်ဖြတ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အချက်ကလဲတစ်ခုပေ့ါ။ အလွန်အကျူး " မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဖွား " ဆိုပြီး မဖော်ကျူးလိုပေမယ့် အမှန်ကတော့ ဟုတ်ပါတယ်လို့ ပြောလို့ရသား။ သင် မြင်ဖူးတဲ့ လူတစ်ထောင်ကိုကြည့်ကြည့်လို့ တစ်ယောက်လောက် ပြတ်သားတဲ့ Abs ရှိပါသလား။ အဖြေက မရှိပါဘူး။
အခုလဲ မေးကြည့်ပါရစေအုန်း။ သင်ဟာ ဝသူ၊ ပိန်သူ ဘယ်လိုပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ တစ်နေ့နေ့မှာ6packs abs ရမယ်၊ လိုချင်ပါသလား မေးခံခဲ့ရရင် မလိုချင်ပါဘူးလို့ ဖြေမယ်မထင်ပါ။ သာမန် လက်မောင်းတွေ။ ရင်အုတ်ကြွက်သားတွေ ပြည့်စုံနေပါစေအုန်း၊ ရှင်းလင်းတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား မရှိရင် တစ်ခုခုလိုနေသလို ဖြစ်နေမှာပါပဲ။
ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားဟာ လူတိုင်း လိုချင်တပ်မက်ကျပေမယ့် တစ်ကယ်ရဖို့ လုပ်တဲ့ အခါ ထင်သလောက်မလွယ်ပါဘူး။ ယခင် ဆောင်းပါးတွေဖြစ်တဲ့6packs abs ရအောင်လုပ်နည်း၊6packs abs အတွက်ဘယ်လိုစားရမလဲ စသဖြင့် ရေးပြီးပြီ၊ သင်လဲ ဖတ်ပြီးသွားလို့ လိုက်လုပ်နေပြီ၊ ဒါပေမယ့် အခုထိ သိသာထင်ရှားတဲ့ Abs မရသေးဘူးဆိုရင်တော့ အခုအောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အမှားတစ်ခုခုကို သင်လုပ်မိနေသလား သိရအောင် ဆက်ဖက်ကြည့်လိုက်ကြပါစို့။
၁။ အိပ်ထမတင် အချက်ပေါင်းများစွာလုပ်ပြီး ဗိုက်ကအဆီတွေကို ဖယ်ဖို့ ကြိုးစားခြင်း
သန်မာတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားဟာ ထင်ရှားတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားရစေမယ့်လို့ အပြီးပြတ်ဆိုလို့မရပါဘူး။ " Abs areagame of body fat " လို့ အဆိုရှိတဲ့ အတိုင်း ထင်ရှားတဲ့ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားဟာ ခန္ဓာကိုယ်က အဆီကိုချဖို့ ကြိုးစားရမယ့် တိုက်ပွဲတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ထမတင် အချက်ပေါင်းများစွာ ဘာ့ကြောင့်မလုပ်သင့်သလဲဆိုတာ အရင်ကပြောပြီးဖြစ်ပေမယ့် မဖတ်ရသေးသူများအတွက် ပြန်အတို ရေးလိုက်ပါတယ်။ အရင်ဆုံး ဘာ့ကြောင့် အိပ်ထမတင် အချက်ပေါင်းများစွာ လုပ်သလဲ မေးခွန်းနဲ့ စလိုက်ရအောင်။
- ဗိုက်ပေါ်က အဆီကျဖို့
- ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ကြီးထွားလာမှ မြင်ရမှာမလို့
ပထမ အကြောင်းပြချက်ဖြစ်တဲ့ ဗိုက်ပေါ်က အဆီကျဖို့ သင်ဟာ အိပ်ထမတင်လုပ်နေတယ်ဆိုရင် အချိန်ကုန်တယ်၊ တစ်ရေးတစ်မော ဖြစ်ဖြစ် အနားယူနေရင် ပိုကောင်းမယ်လို့ ဆိုပါရစေ။ တစ်စုံတစ်ယောက်က သင့်ကို အိပ်ထမတင်လုပ်ပြီး ဗိုက်ကအဆီချနိုင်တယ်လို့ အကြံပေးလာခဲ့ရင် သင်တန်းကြေးမပေးရသေးခင် လှည့်ထွက်လာရင် လှည့်ထွက်၊ ပေးပြီးသွားရင်လဲ နောက်ထပ် သက်တမ်းမတိုးဖို့ ကြိုးစားပါလို့ ဆိုပါရစေ။
ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာက အဆီချဖို့ ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းလေးပဲ ကွက်ပြီးလုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်မလို့ ဗိုက်ပေါ်က အဆီကျချင်သူများအတွက် ဗိုက်လေ့ကျင့်ခန်း အိပ်ထမတင်လုပ်ခြင်းဟာ အကျိုးမရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းတွေက အကျိုးရှိသလဲ ဆိုတာကိုတော့ Page ထဲမှာ ဆောင်းပါးတွေရှိတာမလို့ ဝင်ဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ကြီးထွားလာမှ မြင်ရမှာမလို့
ဒီအချက်က မှန်သလိုလိုရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် " မှန်သလိုလို " အဆင့်ပဲ မလို့ မမှန်ပါဘူး။ သင့်ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ဘယ်လိုပဲရှိနေပါစေ၊ ယောင်္ကျားလေးဆို Body fat 12%၊ မိန်းကလေးဆို Body fat 17% လောက်ရှိမှ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကို စမြင်ရတာမျိုး။ ဒါ့ကြောင့်မလို့ Body fat % ကို ချဖို့ မကြိုးစားပဲ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သားကြီးလာအောင် လုပ်နေခြင်းဟာ ထင်ရှားတဲ့ Abs ကို မြင်ရစေမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
(Body fat % ဆိုတာ သင့်ခန္ဓာကိုယ်မှာ အဆီပမာဏဟာ ဘယ်လောက်ရှိသလဲ ခန့်မှန်းတဲ့ ကိန်းဂဏန်းပါ။ ရာခိုင်နှုန်းနည်းလေ၊ အဆီပမာဏနည်းပြီး ကျစ်လျစ်လေလို့ ယူဆပါတယ်။)
ဒါ့ကြောင့် အဆီပမာဏနည်းအောင် ကြိုးစားပါ။ ဒီလိုမှ မဟုတ်ပဲ သင်ဟာ အိပ်ထမတင် အချက်ပေါင်းများစွာ လုပ်ပြီး ထင်ရှားတဲ့ Abs ရဖို့ ကြိုးစားနေပါသလား။
၂။ လုံလောက်တဲ့ ပြင်းထန်မှု မရှိခြင်း
တစ်ချို့လူတွေ လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခါလုပ်ရင် အကြိမ်၂၀၀၊ ၃၀၀ အထိလုပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သင်ဟာ ဝမ်းဗိုက်ကြွက်သား ခံနိုင်ရည်ပိုရှိလာဖို့ ကြိုးစားနေသူဆိုရင် ဒီလောက်အကြိမ်ရေ ပမာဏ အများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အကြိမ်အရေအတွက် များစွာလုပ်ခြင်းဟာ ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးခြင်းထပ် ခံနိုင်ရည်ကိုသာ ပိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်လို့ပါပဲ။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ ခံနိုင်ရည်အတွက်မဟုတ်ပဲ၊ ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးဖို့ ကြိုးစားနေပါသလား။ ဟုတ်ကဲ့၊ ထင်ရှားတဲ့ ကြွက်သားရဖို့ Body fat % နည်းဖို့ ပထမဆုံးအရေးကြီးသလို ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးပြီး ကြီးလာဖို့လဲ လိုသေးတာမလို့ သင်ဟာ ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးလာအောင် လုပ်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီလို ကြွက်သားဖွံ့ဖြိုးလာဖို့ဆိုရင် အကြိမ်ရေနည်းနည်း (၈ကြိမ်နဲ့ ၁၅ကြိမ်ကြား) ပဲ လုပ်နိုင်လောက်အောင် ခက်ခဲဖို့လိုပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင်ဟာ အိပ်ထမတင် ပုံစံတစ်ခုကို လုပ်လို့ အကြိမ် ၂၀လောက်ရတယ်ဆိုပါစို့။ ဒီပုံစံကိုပဲ ၁၂ကြိမ်လောက်ပဲလုပ်နိုင်ဖို့ အလေးတုံးကိုင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခက်ခဲမှုပိုအောင် လုပ်ပါ။ ခက်ခဲမှုပိုလေ၊ စိန်ခေါ်မှုပိုလေ၊ လိုအပ်တဲ့ Protein စားသောက်တဲ့ အခါ ပိုကြီးထွားလေမလို့ တစ်ဆင့်ပြီး တစ်ဆင့် ပြင်းထန်မှုပိုလာအောင် အလေးတုံးဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ခုခုလေးလံတာဖြစ်ဖြစ် သုံးပြီး ကြိုးစားပါ။
၃။ အိပ်ထမတင် နေ့စဉ်လုပ်ခြင်း
ဒီတစ်ခုကို ပြောရရင် နည်းနည်းလက်ပေါက် ကပ်ပါတယ်။ Professional အလေးဆော့သူတွေ အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ ပုံမှန် လေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်အပြီးမှာ အိပ်ထမတင်ကို ၁၀မိနစ်ခန့် ထည့်လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ နေ့စဉ်နီးပါးပေါ့။
ဒါပေမယ့် သင်ဟာ Professional မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့လို့ အတွေ့အကြုံပြည့် မရှိသလို ဘယ်အချိန်မှာ ဘာလုပ်ပြီး၊ ဘယ်အချိန်မှာတော့ နားရမလဲဆိုတဲ့ ချိန်ဆမှု အပိုင်းမှာရော ကြွက်သားသန်မာမှု၊ ဒါဏ်ဖြစ်ရင် အမြန်ဆုံး ပြန်သက်သာမှု အပိုင်းတွေမှာပါ ဘယ်လိုမှ လိုက်မမှီပါဘူး။
အကောင်းဆုံးအဖြေကတော့ အကြိမ်ရေ ၈ကြိမ်နဲ့ ၁၂ကြိမ်ကြား လုပ်နိုင်တဲ့ ပြင်းထန်မှုမျိုးနဲ့ ပုံစံစုံအောင်လုပ်၊ တစ်ပတ်မှာ ၂ရက်မှ ၃ရက်အထိ ရက်ခြားလေးနဲ့ လုပ်တာ အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
၄။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံ မပြည့်စုံခြင်း
အိပ်ထမတင် လို့ မြန်မာလို အလွယ်ခေါ်ပေမယ့် ပုံစံကွဲတွေရှိပါတယ်။ လူသိများတဲ့ အိပ်ထမတင်ပုံစံ တစ်မျိုးထဲ လုပ်နေသရွေ့ ပြည့်စုံတဲ့ 6packs ရမလာပါဘူး။ သာမန်လူသိများတဲ့ ပုံစံဟာ အပေါ်ပိုင်း 4packs လောက်ကိုသာ ထိရောက်မှုရှိပါတယ်။ ဝမ်းဗိုက်သား အောက်ပိုင်း ၂ခု၊6packs ဘေးမှာရှိတဲ့ ခါးဘေးသား Obliques စတာတွေကို ထိရောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံတွေ ထည့်လုပ်ပါက ပိုမို ကြည့်ကောင်းမယ့် Abs ကို ပုံဖော်ပေးနိုင်သလို ရေပန်းစားတဲ့ V shape ခါးအကျပုံစံကိုလဲ ရလာစေပါလိမ့်မယ်။
၅။ Abs မြင်သာလောက်အောင် အဆီမနည်းသေးခြင်း
Abs areagame of Body fat လို့ အပေါ်မှာ ဆိုခဲ့ပါတယ်။ ဒီအချက်က 6packs abs အတွက် အဓိကအကြီးဆုံး အချက်ပါပဲ။
ရိုးရှင်းတယ်ဟုတ်။ အဆီဖုံးနေသေးသရွေ့ Abs ကိုမြင်လာစရာ အကြောင်းမရှိပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်အဆီပမာဏ နည်းအောင်ကြိုးစားဖို့လိုပါတယ်။ အဆီချတဲ့အခါမှာ Page ထဲက ဆောင်းပါးတွေအတိုင်း ကစားနိုင်၊ Diet လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ပြန်လည်ရှာဖတ်ဖို့ သင့်တဲ့ ဆောင်းပါးတွေက 6packs abs ရအောင် ဘယ်လိုစားမလဲ၊ ချရခက်တဲ့ ဗိုက်ခေါက်အဆီကို လက်တွေ့ကျကျဘယ်လိုချမလဲ၊ အဆီကျဖို့ ရိုးရှင်းလွယ်ကူသောနည်းများ စတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆောင်းပါးတွေပဲ ဖြစ်ပြီးComment မှာ Link ချပေးထားပါတယ်။
အပေါ်က အချက်တွေအတိုင်း လိုက်နာမယ်၊ လိုက်လုပ်ချင်တယ် ဆိုသူတွေအတွက် အောက်မှာ လုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းပုံစံ နမူနာ ပြလိုက်ပါတယ်။ ပုံတစ်ပုံ ချင်းစီမှာ လုပ်နည်းတွေကို စာနဲ့ ရေးထားတာမလို့ အလွယ်တကူ လိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အလေးမလေ့ကျင့်ခန်းတွေ လုပ်အပြီးမှာဖြစ်ဖြစ်၊ သီးသန့်တစ်ရက် သတ်မှတ်ပြီးတော့ ဖြစ်ဖြစ် လုပ်လို့ရပါတယ်။
နမူနာ Training program ကတော့
Beginner အခုမှ စသူတွေအတွက်
၁။ Crunches ၁၀ကြိမ်မှ ၁၅ကြိမ်
၂။ Heel touch တစ်ဖက် ၁၀ကြိမ်
၃။ Reverse crunches ၈ကြိမ်မှ ၁၅ကြိမ်
၄။ Twisting crunches တစ်ဖက် ၈ကြိမ်
၅။ Planking စက္ကန့် ၂၀မှ ၃၀
(အကြိမ်ရေက ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရသလောက် လုပ်ပါ)
၁ကနေ ၅အထိကို အစအဆုံး ၂ခေါက်မှ ၄ခေါက်ထိ ပြန်ကြော့ပါ။
Intermediate onwards လုပ်တာ အတန်အသင့်ကြာပြီး အတွေ့အကြုံရှိသူများအတွက်
၁။ Crunches with weights or Cable crunches
၂။ Reverse crunches or Hanging leg raise
၃။ Twisting crunches with weights တစ်ဖက် ၈ကြိမ်
၄။ Abs roll ၈ကြိမ်မှ ၁၂ကြိမ်
၅။ Planking ၂၀စက္ကန့်မှ ရသလောက်
အပေါ်ကနမူနာအတိုင်း ၁ကနေ ၅အထိကို ၃ခေါက်သို့မဟုတ် ၄ခေါက်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးပဲ အပေါ်ကပြောတဲ့ အချက်တွေကို ဂရုတစိုက် လိုက်နာပြီး ကြိုးစားမယ်ဆိုရင် တစ်နေ့နေ့မှာ ပြတ်သားတဲ့ Abs ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ နည်းတွေက ရိုးစင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် လိုက်နာပြီး တစိုက်မတ်မတ် ပန်းတိုင်ရောက်ဖို့ကတော့ ထင်သလောက် မရိုးရှင်း မလွယ်ကူပါဘူး။ ဒါ့ကြောင့်လဲ ရလာတဲ့ တစ်နေ့ကျ မတစ်ထောင် တစ်ကောင်ဖွားလို့ ဂုဏ်ယူလိုက်ကြပါစို့။
အော် မေ့လို့။ရတဲ့ တစ်နေ့ကျ ထုံးစံအတိုင်း Page မှာ Chat box ကတစ်ဆင့် လာကြွားဖို့ မမေ့ပါနဲ့လို့။
လုပ်နေတဲ့ အသိတွေရှိရင်လဲ လက်တို့ပြီး ဝေမျှနိုင်ပါကြောင်း။
Credit: Golden Dream´s Page